Internetka – Bogga 5 – Windows – Vessoft
MiPony – softiweer si xog looga soo dejiyo adeegyo faylal-wadaag ah oo kala duwan. Softiweerku wuxuu awoodaa inuu soo dejiyo xogta iyadoon xadidanayn nidaamka lacag-bixinta.
Tani waa wargeeye shirkad leh hawlaha ugu sareeya si ay ula xiriiraan wadahadal kooxeed iyo taageero ah shirarka codka ama fiidiyaha.
Software ayaa dadka ku yeedhi xagga telefoonka ee qayb kasta oo ka mid ah caalamka. Waxa ay taageertaa technology ee khaaska ah ee khasaaraha yar oo tayo leh ee xidhiidhka cod.
HipChat – softiweer waxaa loogu talagalay in lagu abaabulo habsami u socodka howlaha loona abuuro goob shaqo oo kaliya si kor loogu qaado is dhexgalka shaqaalaha.
BriskBard – waa barnaamij kumbuyuutar oo lagu qabto howlaha maalinlaha ah ee internetka. Waxaa ka mid ah softiweerka, waxaa ku jira biraawsar, macmiil e-mayl, mihnad warbaahin, macmiilka wareejinta xogta, iwm.
Downloader Video-ga Facebook – maamule ku habboon oo kala soo baxa faylasha fiidiyowga ee Facebook iyo adeegyada kale ee caanka ah. Barnaamijku wuxuu awood u siinayaa inuu u rogo fiidiyeyaasha qaabab kala duwan oo maqal ah oo looga soo saaro raadadka codka maqalka fiidiyowga.
MP3 Rocket – waa qalab ku habboon oo lagu baaro oo laga soo dejiyo faylal kala duwan oo laga helo internetka. Software wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u beddelo faylasha soo degsan qaabab caan ah oo aad ka soo saarto raadiyaha maqalka fiidiyoowga ah.
JDownloader – maamule u deg deg ah oo wax ku ool ah faylalka soo dejinta. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka soo degto faylasha adeegyada caanka ah ee martigelinta faylka waxaana ku jira ku daridooda.
mIRC – macmiil si uu ugula xiriiro ugana beddelo feylasha shabakadda IRC. Software-ka ayaa hubiya dadka isticmaala kana horjoogsanaya soo dejinta faylasha xaasidnimo ee shabakadda.